အကောင်းဆုံး Hydrophilic အေးဂျင့် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့် Hydrophilic အေးဂျင့် စက်ရုံကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
CHERNG LONG ENTERPRISE CO., LTD. တွင်တည်ရှိသည် Taiwan။ ကျနော်တို့၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ရာတွင်ပါဝင်နေတဲ့ professional စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ Hydrophilic အေးဂျင့်။ ကျနော်တို့အမြဲပြောင်းလဲနေတဲ့စျေးကွက်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆောင်မှုအမိန့်ကိုကြိုဆိုကြသည်။ ကျနော်တို့ ပို. ပို. အတန်းမြင့်ထုတ်ကုန်များထူးချွန်ဝန်ဆောင်မှုဈေးအချိန်နှင့်တပြေးညီပေးပို့အပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့နိုင်ငံတကာစျေးကွက်ရှယ်ယာပိုမိုချဲ့ထွင်ကြသည်။ ကျေးဇူးပြု ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသည့်အချိန်တွင်မဆို။
သွား-Ahead, ရိုးသား-ပူးပေါင်းကာထိပ်တန်းအရည်အသွေးမြင့်မားသောနည်းပညာ: အားလုံးဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုမှုများကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှါ, ငါတို့ကုမ္ပဏီအောက်ပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာပါလိမ့်မယ်။ အရာအပေါင်းတို့ကိုကမ္ဘာအနှံ့ကောင်းစွာရောင်းချနေကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များပါစေ။
ပုံစံ - CL-661
ဖွဲ့စည်းမှု:မဟုတ်-ionic နှင့် cationic ဒြပ်ပေါင်းအရောအနှော
ဤအေးဂျင့် CL-661 သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်,ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှဂရုတစိုက်သုတေသနပြုပြီးကောင်းမွန်သောဖိုင်ဘာပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ရေရှည်နှင့်ရေငွေ့တွန်းလှန်နိုင်သည့်အေးဂျင့်ဖြစ်သည်.အဓိကအားဖြင့်ဒြပ်အမျှင်များနှင့်သဘာဝဖိုင်ဘာအထည်များတွင်အသုံးပြုသည်.ဒီအေးဂျင့်ကြာရှည်ခံ၏သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်,ရေတွန်းလှန်,ရေနံတွန်းလှန်ခြင်းနှင့်နူးညံ့ခြင်း.
PFOA သို့မဟုတ် PFOS မပါဝင်ပါ
အကြံပြုထားသောသောက်သုံးသောပမာဏမှာ3ဖြစ်သည်%~6% (80 အထက်ဖိအားစုတ်ယူခြင်း%)
140 အထက်အထက် Set နှင့်ခန်းခြောက်℃
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.textileauxiliaries.com.tw/my/hydrophilic-agent.html
အကောင်းဆုံး Hydrophilic အေးဂျင့် ၀ ယ်ယူပါ။ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ခုမှ Hydrophilic အေးဂျင့် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်း ၀ ယ်သူနှင့်ဖြန့်ချိသူရဲ့အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်ပါတယ်
အထည်များအတွက် Hydrophobic Coating